Hubka uu Mareykanku isku difaacayo haddii lasoo weeraro muxuu yahay? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaHubka uu Mareykanku isku difaacayo haddii lasoo weeraro muxuu yahay?
Bal male’awaal in weerar lagu qaado Mareykanka. Diyaarad uu leeyahay dal cadowgiisa ah, oo uu hub saaran yahay, ayaa ku sii wajahan dhinaca xeebta, waxayna burburineysaa qalabka raadaarka ee soo qabta diyaaraadaha. Diyaaradaha dagaalka ayaa isjiiray waxaana socda dadaal xoog badan oo lagu ogaanayo bartilmaameedka.
Laakiin habka difaaca ee ugu wanaagsan qaranka ma aha maraakiibta diyaaradaha xambaara ama gantaallo. Waa sanduuq cajiib ah oo ay ku jiraan atom-yo qaboow.
“Isticmaala kumbuyuutarrada yar yar,” ayuu ku qeylinayaa nin janaraal ah. Atom-yada ku dhex jira kumbuyuutarradaas ayaa xallin kara dhibaatada socota, si deg deg ah ayeyna u tilmaami karaan qaabka loo hagaajin karo qalabka raadaarka ee diyaaradaha qabta. Markaasna waxaa suurtagal noqoneysa in diyaaradaha cadowga la arko oo la bartilmaameedsado.
Hal shirkad oo qalabkan sameysa, oo magacaabo ColdQuanta, ayaa durbaba billowday in ay ka shaqeyso in xal loo helo haddiiba ay dhacdo xaalad noocaas oo kale.
Dhawaan ayey shirkaddan heshiis la saxiixatay waaxda difaaca ee Mareykanka, si ay qalabkaas ugu diyaariso. Waxaa loo sii diyaar garoobayaa in waddo badbaado ah la helo haddii habka difaaca Mareykanka uu burburo.
Si qalabkan loo sameeyo waa in kumbuyuutarrada lagu sameeyo atom-yo aad u qabow, taasina waxay ka dhigeysaa Kumbuyuutarrada ugu qabow caalamka.
“Waxa nalaga dalbaday inaan sameyno 40-ka bilood ee soo socda gudahooda waa inaan awood u yeelanno helitaanka qalab si dhab ah wax uga qaban kara difaaca dagaal run ah iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii habka difaaca ee horay u jiray uu guul darreysto,” ayuu yidhi Bo Ewald, oo madax ka ah shirkadda ColdQuanta, oo fadhigeedu yahay gobolka Colorado.
Muxuu qabowga Muhiim u yahay?
Barfasoor Andrew Daley, oo ka tirsan Jaamacadda Strathclyde iyo saaxiibbadiis ayaa sidoo kale ka shaqeynaya qalabkan lagu rakibayo atom-yada qabow ee kumbuyuutarrada lagu dhex sameynayo.
Wuxuu sheegay in qabowga uu muhiim u yahay si atom-yada looga shaqeysiiyo, looguna xakameeyo maadaama ay aad u yaryar yihiin.
Shirkad kale oo laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa iyadana ku howlan sidii ay u sameyn lahayd qalab la mid ah midka ay tijaabadiisa waddo shirkadda ColdQuanta.
Mas’uuliyiinta shirkaddan, oo lagu magacaabo Pasqal, ayaa sheegay in qalabkooda ay ku saleynayaan tamarta loo yaqaanno EDF.
Haddii ay shaqadooda ku guuleystaan waxay u adeegsan doonaan xoojinta awoodda ay ku socdaan gawaadhida korontada ku shaqeeya.
Trump iyo Biden yaa ku horreeya saadaasha guusha?